တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အရှိန်မြှင့်တင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုအား IMF ချီးကျူး - Xinhua News Agency
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kristalina Georgieva က ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဧပြီ ၁၃ ရက်တွင် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့၌ ဆင်ဟွာသတင်းဌာနနှင့်အင်တာဗျူးဖြေကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊မေ ၃၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kristalina Georgieva က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်အောင် အရှိန်မြှင့်တင် လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် ချီးကျူးလိုက်ပြီး လက်ရှိကပ်ရောဂါမူဝါဒသည် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးမူဝါဒဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Sinovac ကာကွယ်ဆေးကုန်ကြမ်းများ ပထမသုတ် တင်ဆောင်လာသည့် လေယာဉ်သည် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုလေဆိပ်သို့ မေ ၂၁ ရက်က ရောက်ရှိလာပြီးနောက် ဝန်ထမ်းများက သယ်ချနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ လူဦးရေ အနည်းဆုံး ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးသွားမှာပါ ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းမှာတော့ အနည်းဆုံး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထိုးနှံပြီးဖြစ်ရပါမယ်” ဟု ပေကျင်းမြို့၌ ရုံးချုပ်ဖွင့်ထားပြီး တရားဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သော အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးဖိုရမ်(IFF) ၏ အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးအတွက် အဖွင့်မိန်းခွန်းပြောကြားစဉ် ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့အကြီးအကဲက ကြိုတင်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ဆေးငွေကြေးလှူဒါန်းမှု နှင့် ကျရိပ်သန်းနေသော စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းကို သေချာစွာကုစားနိုင်ရေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကုန်ကျစရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၅၀ ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကာကွယ်ဆေးများ မြန်ဆန်စွာထိုးနှံပေးခြင်းသည် ယခုကာလမှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အကြား ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉ ထရီလီယံအထိ ရလဒ် ထွက်ပေါ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြောကြားခဲ့သည်။
“ ဒီနေရာမှာ ပြည်တွင်းမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့ အရှိန်မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ ပြည်ပကို ကာကွယ်ဆေး ထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ချီးကျူးထိုက်ပါတယ် ” ဟု Georgieva က ဆိုသည်။
စီးပွားရေးပြန်လည်နလံထူရန်မှာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် မတူညီသောလမ်းကြောင်း အခက်အခဲမျိုးစုံရှိနေကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ “ အရေအတွက်အနည်းငယ်မျှသော ခေတ်ရှေ့ပြေးနှင့်စီးပွားရေးဈေးကွက်ပေါ်ထွန်းပြီး နိုင်ငံများသည် အားကောင်းမောင်းသန်ဖြင့် ရှေ့ဆက်သွားနေသလို ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောနိုင်ငံများသည် နောက်တွင် ကျကျန်နေရစ်ခဲ့ရကြောင်း ၊ အဓိကအားဖြင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားနိုင်မှုအကန့်အသတ်ရှိနေခြင်း နှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးနိုင်စွမ်းပမာဏ အကန့်အသတ်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း” ၎င်းက ဆိုသည်။
“ ဒီကပ်ရောဂါကြီးအမှန်တကယ်အဆုံးသတ်သွားမယ့်အချိန်ထိ ကျွန်မတို့ဟာ အမြင့်ဆုံး မသေချာမရေရာမှုတွေကို ကြုံတွေ့နေရအုံးမှာပါ” ၊ “ ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ လှေးကြီးတစ်စင်း ပေါ်မှာ အတူရှိနေကြတာပါ”ဟု Georgieva ကဆိုသည်။
“ ဒီအရာထဲမှာ အပြန်အလှန်အမှီပြုနေထိုင်ခြင်းဟာ ကျွန်မတို့ခွန်အားပါပဲ ။ ကာကွယ်ဆေး နဲ့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ချက် ကနေ ခေတ်သစ်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခွန်အခကောက်ခံခြင်းစနစ်တစ်ခုဆီသို့ စတဲ့ ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အားသစ်လောင်းထောက်ခံမှုတစ်ခုကို ကျွန်မတို့ မြင်တွေ့ရမှာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စီးပွားရေးပုံစံသစ် အကူးအပြောင်းတစ်ခုသည် စီးပွားရေး နှင့် ငွေကြေး ဗရမ်းဗတာ ဖြစ်မှု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်မလာအောင် ရှောင်ရှားရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးကြောင်း Georgieva က ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၂၀၆၀ ပြည့်နှစ်အရောက်တွင် ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှု သုညရာခိုင်နှုန်းအထိ ရောက်ရှိရေး ဦးတည်ချက်သည် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည် နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြနေကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အစိမ်းရောင်အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ ကာဗွန်လျှော့ချမှုသည် လာမည့် ၁၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စုစုပေါင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး(GDP) ၀.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးမြင့်နိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း သန်းပေါင်းများစွာ ဖန်တီးပေးနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
According to IMF research, green infrastructure investment with carbon pricing could boost global gross domestic product (GDP) by 0.7 percent annually over the next 15 years – and create millions of jobs.
(1) Kristalina Georgieva, managing director of the International Monetary Fund (IMF), receives an interview with Xinhua during the IMF Spring Meetings in Washington D.C., the United States, April 13, 2021. (Kim Haughton/IMF/Handout via Xinhua
(2) Airport staff members unload the first batch of Chinese Sinovac vaccine raw materials fromaplane at the Cairo International Airport in Cairo, Egypt, May 21, 2021. (Xinhua/Sui Xiankai)
မာလီနိုင်ငံနိုင်ငံတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော တရုတ်ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့ဝင် ၄၁၃ ဦးကို ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ် ချီးမြှင့်